ALinks - Bogga 3 - socdaalka iyo ku noolaanshaha dibedda dhammaan
Sannad kasta 5-ta Juun, Maalinta Deegaanka Adduunka waxaa loo xusaa si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan caqabadaha sii kordhaya ee deegaanka sida wasakheynta badda, kuleylka adduunka, isticmaalka joogtada ah, iyo dambiyada duurjoogta. Iibsashada hadiyadaha bey'adda u habboon waxay muujineysaa inaad daryeel dheeraad ah siisay
June 4, 2021 Antika Kumari shaqo, safarka
Loo shaqeeyayaasha Amsterdam waxay si isa soo taraysa ugu diyaar garoobeen sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen saacadaha shaqada ee aan caadiga ahayn, hoos u dhigista usbuucyada shaqada, iyo shaqada fog. Nederland waxaa badanaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah waddamada ugu waaweyn ee lagu gaaro isku dheelitirnaan shaqo-nololeed oo wanaagsan iyo tayada guud ee nolosha. Nederland
Sidee shaqo looga helaa Iceland? Ilaha shaqada ee khadka tooska ah Kuwani waa qaar ka mid ah boggaga internetka ee ugu caansan raadinta shaqo ee Iceland: Alfred: Nooca barnaamijkan ee degelku si fiican ayuu u shaqeeyaa, isagoo taxanaya shaqooyin kala duwan, badankooduna
June 2, 2021 Antika Kumari shaqo
Cortland waa magaalo ka tirsan Gobolka Cortland ee Mareykanka. Cortland, oo badanaa loo yaqaan Magaalada Boqortooyada, waxay ku taal gobolka Koonfurta Tier ee New York. Ka shaqeynta Cortland waa khibrad cajiib ah. Weligey uma shaqeyn
Sidee shaqo looga helaa Finland?
June 2, 2021 Maitri Jha Finland, shaqo
Waa inaad bilowdid ugaarsigaaga shaqada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah markaad timaado Finland. Haddii aad horeyba uga mid ahayd qaranka, u tag xafiiska shaqada ee kuugu dhow iskuna diiwaan geli shaqo doone. Inta badan fursadaha shaqo ee ugu weyn
Sidee shaqo looga raadsadaa Lille?
June 2, 2021 Antika Kumari shaqo, safarka, waxyaabo waxtar leh
Lille, waqooyiga Faransiiska, waxaa loo yaqaan magaalada French Flanders waxayna taariikh dheer ku leedahay soo saarista dharka iyo maaliyadda. Sannad kasta, waxay heshaa tiro aad u tiro badan oo duug ah sida magaalo arday caan ah. Magaalada
Sidee shaqo looga helaa Zambia?
June 2, 2021 Maitri Jha shaqo, Zambia
Zambia waa dal Afrikaan ah oo aan bad lahayn oo ku yaal koonfurta koonfuurta. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo, Malawi, iyo Tansaaniya ayaa deris la ah. Ingiriisigu waa luqadda rasmiga ah. Si aad uga shaqeysato Zambia, waa inaad marka hore codsataa rukhsad shaqo kahor
«Wararkii hore 1 2 3 4 5 ... 68 Xogta ku xiga»